Mayelana ne-P & M → Imishini efekethisiwe yekhompyutha • Isitolo esidayisa yonke impahla
Isipiliyoni esihlanganiswe nobuchwepheshe
Igumbi lokuthunga le-P & M lasungulwa ngo-1995 eRawa Mazowiecka. Kusukela ngo-2003. sinikezela ngezinsizakalo zokuthunga, ukusika, uku-ayina nokufaka amalebula. Siphinde futhi sinikeze ukuthengiswa okuningana kwezimpahla zokusebenza nezokukhangisa.
Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe kakhulu baqhosha ngeminyaka eminingi yesipiliyoni, bayakujabulela ukusiza futhi baluleke ekwakhiweni nasekukhetheni kwendlela yokubeka uphawu enhle kunazo zonke - sizothatha noma yimuphi umyalo!
Sine park yemishini ebanzi, yesimanjemanje neyilungiselelwe kahle, lapho kukhona:
Imishini ye-Lockstitch enezinto zokuhamba ezingezansi - imishini ezenzakalelayo
Imishini ye-Lockstitch enezinto zokuhamba eziphansi nezingaphezulu nge-hook enkulu - imishini ezenzakalelayo
Flat izinaliti ezimbili
Chain izinaliti ezimbili
3, 4 no-5 imbozo engaphezulu
Inaliti engu-4 nenalithi engu-12 enethuba lokuthunga emugqeni
Ukwenza amatafula insimbi kube nama-generator enjini
Ukusika kwetafula lasekamelo ngomsiki we-8,5 m ngommese oqonde mpo kanye nommese webhendi
Sikhathalela ikhwalithi ephezulu kakhulu yemikhiqizo yethu
Igumbi lethu lokuthunga liyaqikelela ukuthi imikhiqizo esiyikhiqizayo yenziwa ngezindwangu ezisezingeni eliphakeme kakhulu ezinempahla esebenza kahle kakhulu nobuchwepheshe bokudaya obusezingeni eliphezulu kakhulu. Siyakwazi ukuhlangana nosonkontileka abafunwa kakhulu ngokusebenzisa imishini esinayo. Sinokuhlangenwe nakho okuningana kokuthunga, ukusika nokuklama izinhlangano zokukhangisa nemikhiqizo edumile.
Ikhasimende libaluleke kakhulu kithi
Amakhasimende anelisekile ayinto yokuqala yethu. Izincomo zabo ezinhle zisikhuthaza ukuthi ngaso sonke isikhathi sithuthukise futhi sigcine ikhwalithi ephezulu yemisebenzi yethu.
Izingubo zokusebenza nokukhangisa
Sine ezahlukene - imikhiqizo kuka 6000, izingubo zomsebenzi i ukukhangisa kubakhiqizi abaziwayo ngamanani akhanga kakhulu. Lokhu, phakathi kokunye, amajezi, amakepisi, amavesti, amahembe, uboya, izikibha zepolo, izikibha, izingubo zomsebenzi, izingubo ezikhethekile, izingubo zezokwelapha, zezitolo ezibandayo kanye namakhaza, nezicathulo ezahlukahlukene.
Ukufekethiswa kwamakhompiyutha / ukugqokwa kwezingubo
Ukuphrinta kwesikrini / imicu yezingubo